» कस्ता बिरामीलाई कोरोनाले लामो समयसम्म सताउँछ ? देखिन्छन् यस्ता नयाँ समस्याहरू
कस्ता बिरामीलाई कोरोनाले लामो समयसम्म सताउँछ ? देखिन्छन् यस्ता नयाँ समस्याहरू
४ असार २०७८, शुक्रबार ०६:१८
सम्भव भएसम्म कोरोना बिरामीहरुको लक्षण बुझ्नका लागि विश्वभर धेरै अध्ययन भइरहेको छ। एउटा नयाँ अध्ययनले भन्छ कि लक्षणविना लगभग हरेक पाँचौं बिरामीले कोरोना भएको थाहा पाएदेखि एक महिनासम्म यसको महसुस गरे । त्यो हो, यी बिरामीहरूमा एक महिनापछि, त्यहाँ कोरोनासँग सम्बन्धित केही समस्या भयो। यदि लक्षण गम्भीर छैन भने, प्रायः बिरामीहरू होम आइसोलेसनमा बसेर यसको उपचार गर्दछन् ।
यो अध्ययन अमेरिकाको एक गैर सरकारी संस्था, फेयर हेल्थले त्यहाँका १९ लाख मानिसको बीमा क्लेमको आधारमा गरेका थिए । गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष रोबिन जेलबर्डले भने, “कोविड १९ को लक्षण भए पनि यसले धेरै मानिसहरूलाई लामो समयसम्म असर गरिरहेको छ।”
जेलबर्डले भने, “अध्ययनको नतीजाले यस महत्वपूर्ण मुद्दामा आवश्यक प्रकाश पारेको छ ।” यसबाट कोभिड बिरामीहरू, बीमा नीति निर्माता, विक्रेता, भुक्तानीकर्ताहरू र अन्वेषकहरूको लागि ठूलो सहयोगी हुनेछ।
लङ कोभिडको जोखिम
लङ कोभिड बिरामीहरूमा चार हप्ता भन्दा बढी रहन्छ। अध्ययनले पत्ता लगायो कि लङ कोभिडबाट पीडित सबै उमेरका मानिसहरूलाई जिउ दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो, उच्च कोलेस्ट्रोल, छटपटी, अत्याधिक थकान र उच्च रक्तचापको समस्या थियो।
कोरोनाबाट निको भएका ३० वा त्यो भन्दा बढी समयपछि ती बिरामीको मृत्युको सम्भावना ४६ गुना बी थियो । जसलाई यस समस्याको पहिचान भएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो र निको भएपछि उनीहरुलाई डिस्चार्ज गरिएको थियो । त्यस्तै, अस्पतालमा भर्ना नभएकाहरूमा मृत्युको संख्या कम थियो।
अध्ययनका अनुसार, कोरोनाका १९ प्रतिशत एसिम्प्टोमेटिक बिरामीहरूले उपचार पछि ३० दिन पछि लामो कोभिड लक्षणहरू महसुस गरे। यो तथ्याङ्क लक्षणसहित अस्पतालमा भर्ती भएकाहरूको ५० प्रतिशत र लक्षणहरूको बाबजुद अस्पतालमा भर्ना नभएका २ ७।५ प्रतिशतसम्म थिए।
लङ कोभिडका यी लक्षणहरू उमेर अनुसार देखिए। उदाहरणका लागि, बच्चाहमा, यो समस्या पेटसँग सम्बन्धित पाइएको थियो ।
त्यस्तै, लङ कोभिडका लक्षणहरू पुरुषहरूमा भन्दा महिलामा बढी पाइयो। महिलाको तुलनामा धेरैजसो पुरुषहरूमा मुटु सुन्निएको थियो । यी घटनाहरूमा एक चौथाई हिस्सा १९(२९ बर्ष उमेर समूहका थिए। यसबाहेक, धेरै व्यक्तिहरूमा चिन्ता, डिप्रेसन र एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर देखियो।
लामो कोभिडलाई पोष्ट कोभिड सिन्ड्रोम वा पोष्ट९एक्युट सिक्वल पनि भनिन्छ। अहिलेसम्म यसका कारणहरू राम्रोसँग थाहा छैन। अध्ययनका अनुसार यसको पछाडि एउटा कारण यो हुन सक्छ कि भाइरसले रोगको शुरुवातमा स्नायु प्रणालीलाई क्षति पुर्‍याउँछ। यो धेरै सुस्त रूपमा निको हुन्छ र यस्तो अवस्थामा शरीरमा भाइरस कमै रहन्छ । अर्थडवलीबाट